ယေရှုအကြောင်းကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင | Apg29
တစ်ခါတစ်ရံသင် Youtube ကိုအပေါ်ကိုမှန်ကန်ရွှေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ 1912 ကနေဒီအသံတိတ်ရုပ်ရှင်ယေရှုအကြောင်းပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ပါ! ဒါဟာ ( "နွားစားခွက် မှစ. လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖို့") "နွားစားခွက် မှစ. လက်ဝါးကပ်တိုင်ရန်" ခေါ်တော်မူပါတယ်။
ဒါဟာ 1912 ကနေတစ်ဦးအမေရိကန်ရုပ်ရှင်သည်နှင့်အဲဂုတ္တုပြည်၌နှင့်ခေတ်ပြိုင်ပါလက်စတိုင်းအတွက်တည်နေရာပေါ်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
နွားစားခွက်ထဲကနေလက်ဝါးကပ်တိုင်ရန်, ယေရှုနှင့်အပြည့်အဝသမ္မာကျမ်းစာက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းကိုပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသက် 30 ကြိမ်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်မှတျတမျးတငျထားတဲ့သူ, သူ့အချိန်အတွက်စီးပွားဖြစ်အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်ယေရှု၏အသက်တာ၏ပုံပြင်ကိုပြောပြထားသည်။ အဆိုပါညွှန်ကြားရေးမှူး Sidney Olcott ကိုလည်းရုပ်ရှင်များတွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မင်းသမီးနှင့်စာရေးဆရာ Gene Gauntier ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခဲ့သည်နှင့်အပျိုစင်မာရိသည်ပုံဖော်။
နွားစားခွက် မှစ. လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖို့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်များအတွက်ပိုစတာ (1912) ။
တချို့ကသမ္မာကျမ်းဖြစ်ရပ်များရုပ်ရှင်များတွင်ထုတ်ဖော်။ ဥပမာအားဖြင့်, ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံဆရာရှေိယအဖွစျသညျယရှေုကိုထုတ်ညွှန်ပြပေမယ့်ကျနော်တို့ဗတ္တိဇံကိုမမွငျနိုငျသညျ။ ဒါကြောင့်အဆုံးမှကြွလာသောအခါရုပ်ရှင်၏ခေါင်းစဉ်ကတည်းကအတော်လေးပကတိဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိ။
ဒီအထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိသောကွောငျ့လည်းမကောင်း, ထို့နောက်မကယ်တင်လည်းရှိသေး၏။ သို့သော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အမှန်တကယ်ယနေ့သေဘဝတွေကိုကနေရှင်ပြန်ထမြောက်နှင့်သင်သူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်လက်ခံရရှိသည့်အခါဖြစ်ပါတယ်။
Sidney Olcott တကယ်ရုပ်ရှင်အင်အားသုံးနားလည်ရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ခေတ်ပြိုင်ပါလက်စတိုင်းအတွက်အရပျ၌ယေရှု၏ဘဝကိုအကြောင်းအလေးအနက်ထုတ်လုပ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကြီးပြီးအလွန်ကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာ 26 ဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့ပါတယ်, ပြီးတော့ဖယ်ရှားမူအရမေ့လျော့ခဲ့သည်။
အဆိုပါရိုက်ကူးရေးစဉ်အတွင်းတစ်လုယက်မှုကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုသားကောင်ရုပ်ရှင်အမှုထမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါညွှန်ကြားရေးမှူး Sidney Olcott အဆ 30 ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ခဲ့သောအမြတ်အစွန်းများမဆက်ဆံ, ရှိခဲ့ပါတယ်။
Vitagraph Studios က Kalem Studios ကဝယ်ပြီးနောက်ဒီတော့ရုပ်ရှင်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြောသည်ဂီတနှင့်ဇာတ်ကြောင်းနှင့်အတူဖြန့်ချိခဲ့သည်အဖွဲ့ကို 1919 ခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင် Re-လွှတ်ပေးရန်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယရှေုသညျရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရှိရာမြင်ကွင်းတစ်ခုကို double ထိတွေ့မှုနှင့်အတူဖန်ဆင်းခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးစိတ်အားထက်သန်မှု - ယေရှုအကြောင်းကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်
နွားစားခွက်ထဲကနေလက်ဝါးကပ်တိုင် (1912) တစ်ဦးကအသံတိတ်ရုပ်ရှင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းမှ